China Pet Dog Large Stool Collection Tool Poop Picker orinasa sy mpanamboatra | MiaSein
Anaran'ny vokatra: Fiompiana alika lehibe amin'ny alika biby fiompy
Description:Modely maodely, fitaovana fiarovana ny tontolo iainana matevina, fanoherana ny oksizena, fanoherana ny harafesina. Miaraka amin'ny tahony, mety entin'ny mpampiantrano
Fampiasana: rehefa ampiasaina dia rakofana taratasy ny tampon'ny vongan-tanety, ary avy eo ampiasao ny trano fidiovana hakana azy sy ariana. Na mampiasa fehikibo fako hafa amidy eny an-tsena handrakofana ny ao anaty trano fidiovana ary hakana azy hidina. Mety, tsy manadio ary tsy misy ahiahy. Mety amin'ny fampiasana trano sy fitsangatsanganana izany.
Tombony: mety amin'ny tompony ny manadio ny dikin'ny alika. Azo alaina mora foana amin'ny alàlan'ny lamba famaohana taratasy. Rehefa tsy misy fako manodidina, ny taim-biby dia azo tehirizina mandritra ny fotoana fohy ao anaty boaty, izay tsy ho tara ary tsy misy tsiro. Madio sy madio ara-pahasalamana izy io, ary ny tanan'ny tompony tsy misy ifandraisany amin'ny fako biby. Servieta vita amin'ny taratasy na kitapo plastika azo soloina.
Loko: Royal blue, black
Size （amin'ny sm） ： Halavany: 60cm, clip: 13.5 * 12.5 * 10cm, sakan'ny tahony: 12.5cm
Endri-javatra: Diovy ny taim-bibyo
Fomba fanasan-damba: sasao amin'ny rano sy maina, azafady mba hadio tsirairay. Aza manasa amin'ny entan'ny olombelona
Fomba fitehirizana: Tehirizo amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maina, azafady mitahiry azy manokana, fa tsy amin'ny vokatra olombelona
Mariho azafady: Ity vokatra ity dia noforonina sy novokarin'ny orinasa irery. Tsy manohana ny fanaingoana azy ity vokatra ity. Azafady atsipazo ao anaty fako izao ny dikin'ireo biby fiompy. Aza manala fako. Fahadisoam-pandrefesana isaky ny tanana, azafady mba jereo ny tena zavatra, azafady mba manasa sy mitahiry araka ny fomba fanasan-damba sy ny fomba fitehirizana. Azafady aza mandondona mafy ny vokatra mba tsy hanimbana ny vokatra. Raha tsy afa-po amin'ny vokatra ianao dia mifandraisa amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Previous: Pet Cat Simple Disc Cool sy mahatsikaiky saka latabatra saka saka saka saka olon-dehibe saka fahavaratra mangatsiaka kely saka latabatra saka kilalao
Manaraka: Mametaka tehina mandeha amin'ny jiro ho an'ireo be antitra
Akanjo alika goavambe Labrador Mediam-potoana lehibe alika ...